Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Jordan » Jọdan na-akwụsị iche iche maka ndị njem si mba ọzọ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Akụkọ na -agbasa na Jordan • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Jordan belata ihe ndị a chọrọ maka ndị ọbịa si mba ọzọ
Ndị ọchịchị gọọmentị Jọdan mara ọkwa na a chọkwaghị ka ndị njem si mba ọzọ gaa kpọpụ iche mgbe ha rutere Jọdan.
Ebinyere iwu ọhụrụ ahụ ma banye n'ọrụ na 13 Jenụwarị.
Mgbe ị na-abanye mba ahụ, ndị ọbịa ala ọzọ ga-eweta nsonaazụ nke PCR maka Covid-19, emeghị ka ọ gafee elekere 72 tupu ọpụpụ.
N’ọdụ ụgbọ elu, ndị njem kwesịrị ịnwale ule ugboro ugboro (ụgwọ ọrụ ahụ bụ $ 40). Ọ bụrụ na ule ahụ dị mma, mgbe ahụ, ndị njem nleta ga-anọrọ onwe ha, wee were ule ahụ ọzọ.
Na mgbakwunye, a gụpụla ndị njem ịdebanye aha ha na weebụsaịtị webụsaịtị nke VisJordan.
Ọzọkwa, ndị ọchịchị obodo emeela ka mmachibido iwu ụfọdụ dị na mba ahụ belata. E mere, a kagbuola oge a na-alọta na Fraịdee, mana otu abalị ka dị.